မွနျမာပွညျမှာအရမျးပေါပွီး အလကားရတဲ့အရှကျကို အမရေိကနျမှာ (၁၃)ဒျေါလာနဲ့ ရောငျးနတောတဲ့နျော…. - Barnyar Barnyar
မွနျမာပွညျမှာအရမျးပေါပွီး အလကားရတဲ့အရှကျကို အမရေိကနျမှာ (၁၃)ဒျေါလာနဲ့ ရောငျးနတောတဲ့နျော….
March 16, 2022 Uncategorized 0
တို့နိုငျငံမှာ ပေါမြားလှတဲ့ သရကျရှကျ (Mango Leave)ကို အမရေိကနျနိုငျငံမှာ ၂ အောငျစကို ၁၃ ဒျေါလာ (13$) နဲ့ ရောငျးနတော တှရေ့တော့ ဘာတှေ ကောငျးလဲ ဆိုပွီး google မှာ ရှာကွညျ့ လိုကျပါတယျ။
သူမြားတှေ ရောငျးနတော ကုနျခြော အဆငျ့တောငျ မဟုတျပါဖူးနျော.. သူမြားရောငျးတာ ထိုငျဝယျစားနရေမယျ့ ခတျေလဲ မဟုတျတော့ပါဖူး။ သရကျသီး အရှကျဟာ သရကျသီးထကျ အဟာရ ပိုမြား နပေါတယျ။ ဗီတာမငျ အေ, ဘီ, စီ နဲ့ antioxidant တှေ ကွှယျဝပါတယျ။
သရကျရှကျကို ဆေးဘကျဆိုငျရာမှာ ရနေဲ့ ပွုတျ၍ ဖွဈစေ အရှကျကို အမှုနျ့ ပွုလုပျ၍ဖွဈစေ အသုံးပွုနိုငျသလို အရှတေ့ောငျအာရှမှာ ခကျြပွုတျ စားသောကျ ကွပါတယျ။ ဆေးဘကျဆိုငျရာ အနဖွေငျ့ ဆီးခြို ရောဂါကို ထိနျးညိဖို့ သောကျသုံး ကွပါတယျ။ ဒါအပွငျ သှေးတိုးရောဂါ ထိနျးညှိ ပေးပါတယျ။
စိတျရောဂါ အသကျရှူ လမျးကွောငျး ဆိုငျရာ ရောဂါ ကုသ နိုငျပါတယျ။ အကြိတျတှနေဲ့ ကငျဆာရောဂါကွီးထှားမှုကို လြော့ခြ ပေးပါတယျ။ သညျးခွမှော ကြောကျတညျခွငျးကို ခွဖေကျြ နိုငျပါတယျ။ အစာအိမျရောဂါ သှေးဝမျးသှား ရောဂါတှေ ကုသ နိုငျပါတယျ။
ကွို့ထိုးတဲ့ ရောဂါ အတှကျဆို သရှကျရှကျ အခွောကျကို မီးရှို့ပီး ရှူပေးရငျ ပြောကျကငျး ပါတယျ။ မီးလောငျ ဒဏျရာတှမှော အသုံးပွု နိုငျပါတယျ။ နားကိုကျရောဂါ ကုသ နိုငျပါတယျ..
ကိုယျအလေးခြိနျကို လြော့ခြ နိုငျပါတယျ။ သုံးစှဲနညျး အသေးစိတျကို google မှာ mango leave benefit ဆိုပီး ရှာနိုငျပါတယျ။
အလငျြးသငျ့ရငျ ဘာသာပွနျပွီး ဖျောပွပေးပါဦးမယျ။ မူရငျးရေးသားသူအား လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈပေးပါသညျ။
မြန်မာပြည်မှာအရမ်းပေါပြီး အလကားရတဲ့အရွက်ကို အမေရိကန်မှာ (၁၃)ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းနေတာတဲ့နော်….
တို့နိုင်ငံမှာ ပေါများလှတဲ့ သရက်ရွက် (Mango Leave)ကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ၂ အောင်စကို ၁၃ ဒေါ်လာ (13$) နဲ့ ရောင်းနေတာ တွေ့ရတော့ ဘာတွေ ကောင်းလဲ ဆိုပြီး google မှာ ရှာကြည့် လိုက်ပါတယ်။
သူများတွေ ရောင်းနေတာ ကုန်ချော အဆင့်တောင် မဟုတ်ပါဖူးနော်.. သူများရောင်းတာ ထိုင်ဝယ်စားနေရမယ့် ခေတ်လဲ မဟုတ်တော့ပါဖူး။ သရက်သီး အရွက်ဟာ သရက်သီးထက် အဟာရ ပိုများ နေပါတယ်။ ဗီတာမင် အေ, ဘီ, စီ နဲ့ antioxidant တွေ ကြွယ်ဝပါတယ်။
သရက်ရွက်ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာ ရေနဲ့ ပြုတ်၍ ဖြစ်စေ အရွက်ကို အမှုန့် ပြုလုပ်၍ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်သလို အရှေ့တောင်အာရှမှာ ချက်ပြုတ် စားသောက် ကြပါတယ်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အနေဖြင့် ဆီးချို ရောဂါကို ထိန်းညိဖို့ သောက်သုံး ကြပါတယ်။ ဒါအပြင် သွေးတိုးရောဂါ ထိန်းညှိ ပေးပါတယ်။ စိတ်ရောဂါ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ရောဂါ ကုသ နိုင်ပါတယ်။ အကျိတ်တွေနဲ့ ကင်ဆာရောဂါကြီးထွားမှုကို လျော့ချ ပေးပါတယ်။
သည်းခြေမှာ ကျောက်တည်ခြင်းကို ခြေဖျက် နိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ်ရောဂါ သွေးဝမ်းသွား ရောဂါတွေ ကုသ နိုင်ပါတယ်။ ကြို့ထိုးတဲ့ ရောဂါ အတွက်ဆို သရွက်ရွက် အခြောက်ကို မီးရှို့ပီး ရှူပေးရင် ပျောက်ကင်း ပါတယ်။ မီးလောင် ဒဏ်ရာတွေမှာ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ နားကိုက်ရောဂါ ကုသ နိုင်ပါတယ်..
ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ချ နိုင်ပါတယ်။ သုံးစွဲနည်း အသေးစိတ်ကို google မှာ mango leave benefit ဆိုပီး ရှာနိုင်ပါတယ်။
အလျင်းသင့်ရင် ဘာသာပြန်ပြီး ဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။ မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်ပေးပါသည်။
ဖုတျဝငျလို့သတေယျဆိုပွီး အမအေိုတဈဦးရဲ့ အလောငျးကိုရငျခှဲရုံမှာ စဈဆေးကွညျ့လိုကျသောအခါ
မငျးစိတျဓာတျကလြို့ မဖွဈဘူး… မယိုငျဖို့ လိုတယျ
Visit Today : 725
This Month : 6315
This Year : 59015
Total Visit : 59015
Hits Today : 2514
Total Hits : 336210